Madaxweynaha Puntland oo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya iyo beesha Caalamka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweynaha Puntland oo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya iyo beesha Caalamka
Madaxweynaha Puntland oo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya iyo beesha Caalamka
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa caawa ka hadlay amniga guud ee Puntland, qorsheeyaasha dhinaca amniga ee socda, wuxuuna ka tacsiyeeyay geerida Alle ha u naxariistee guddoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur oo shalay qarax lagu dilay Gaalkacyo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in cadaaladda la marinayo dadkii ka danbeeyay dilkii guddoomiyihii gobolka Nugaal, iyo sidoo kale dadka lagu helo baaritaanada socda ee dilka guddoomiyaha Mudug.
Madaxweynaha, wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in Puntland iyo ciidamadeeda aysan illaa iyo hadda jirin cid gacan ka siisay la dagaalanka argagixisada iyadoo ay wadamo iyo hay’addaha taageera Soomaaliya ay sheegaan in ay Soomaaliya ka taageeraan Amniga.
Wuxuu sheegay Madaxweynuhu in aysan jirin wax taageero Ciidan ah oo ay Puntland hesho.
Ugu danbeyn Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Shacabka Puntland inay doorkooda ka qaataan illaalinta amniga iyo horumarka Puntland, wuxuu si gaar ah Madaxweynuhu fariin ugu diray dhallinyarada reer Puntland inay dowladda kala shaqeeyaan amniga.